प्रेरणाका स्रोत ६ पन्थ भाइ
कृष्ण मल्ल बुुटवल - शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७
गुुल्मीको बलेटक्सार, थोर्गा र दिगाम क्षेत्र खुुदोको लागि प्रख्यात ठाउँ हो। गुल्मी थोर्गाको खुदो झनै नेपालमै ब्राण्ड बनिसकेको छ।
त्यही खुदो पाइने क्षेत्रको एक परिवार हो पन्थ परिवार।
परिवारका ६ भाइ नै नेपालको सरकारी जागिरको उच्च पदमा छन्। गुुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका-४ ठानीडाँडाका बुुद्धिप्रसाद पन्थ (८४) को परिवार हो यो।
पढाइमा उखुको योगदान
बुद्धिप्रसादको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ठूलो इच्छा थियो। पारिवारिक कारण र आर्थिक अवस्थाले उनले सामान्य लेखपढबाहेक माथिल्लो तहसम्म पढ्न सकेनन्।
आफ्नो इच्छा र चाहना हुुँदाहुुँदै पनि अध्ययन गर्न नपाएपछि पन्थले आफूले दुःख गरेर भएपनि छोराहरुलाई उच्च शिक्षा पढाउने अठोट गरे र पूरा पनि गरे।
पन्थको परिवारले उखुु खेती गर्दथ्यो। उनले उखुु लगायत अन्य कृषि पेशामा दुुःख गरेरै भए पनि ६ भाइ छोरालाई उच्च शिक्षा दिए। छोराहरु सबैले बाबुको इच्छा पूरा गरे।
कहाँकहाँ पढे पन्थ दाजुभाइ
विद्यालय तहसम्मको अध्ययन सबै भाइहरुले आदर्श मावि दिगाम र रिडी मावि, रिडीबाट पूरा गरे। ६ भाइ मध्ये जेठा यदुुुलाल पन्थ र माहिला छोरा कृष्णप्रसाद पन्थले रिडीस्थित विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे भने अन्य सबै भाइहरुले आदर्श माविबाटै एसएलसी राम्रो अंककासाथ उत्तीर्ण गरे।
विद्यालय तहपछि ६ भाइले उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन काठमाडौंमै गरे। रवि भन्छन्, ‘धेरै ठाउँमा बस्दा खर्च धेरै हुने भएपछि हामी सबै काठमाडौंमा एकै ठाउँ बसेर पढियो। दुईवटा खाटलाई जोडेर चार भाइ घुँडा धसेर पढियो।’
उनीहरुले ६ महिनालाई पुग्ने चामल, दाल, तरकारीसमेत घरबाटै लैजान्थे। कान्छा भाइ डा. नुरापति पन्थले भने, ‘आइएस्सीसम्म अध्ययन पाल्पाको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनमा गरेपछि काठमाण्डौं गएको थिएँ।
गुल्मीदेखि तानसेनसम्म पैदल
पन्थ दाजुभाइले विद्यालय तहसम्मको पढाई गुल्मीमै गरेपनि क्याम्पसको पढाई भने काठमाडौंमा गरे। ठूला भाइहरुले भने कक्षा ९ र १० पढ्दा रिडीमा डेरा लिएर पढेका थिए।
बुद्धिप्रसादले छोराहरुका लागि खाद्यान्न पाल्पाको तानसेनसम्म कहिले आफैं त कहिले भरिया लगाएर पुर्‍याउँथे। धेरैजसो भाइ सँगै हुनेहुँदा सामानहरु आफैंले बोकेर तानसेनसम्म ल्याउने गरेको पन्थ दाजुभाइको भनाई छ।
तानेसन-काठमाडौं बसभाडा ४५ रुपैयाँ
तानसेनसम्म पैदल आउने उनीहरु त्यहाँबाट बस चढ्थे। तानसेनबाट काठमाडौंसम्म भने सार्वजनिक बसको सुविधा थियो। जेठा भाइ यदुलाल पन्थसँग झनै पुरानो अनुभव छ। विसं २०३७ सालमा एसएलसी पूरा गरेका उनी काठमाडौंसम्म ४५ रुपैयाँमा पुगेको याद छ।
‘गुल्मीको रिडीसम्म फाट्फुट् ट्याक्टर जान्थ्यो। कहिलेकाँही त्यही ट्याक्टरमा झुण्डिएर पनि आइयो।’, उनले भने, ‘धेरैजसो हिँडेर तानसेन पुगेपछि मात्रै बस चढ्थ्यौं।’
विसं २०४४ सालतिर तानसेनबाट काठमाडौं गएको रात्री बसको भाडा ५५ रुपैयाँ तिरेको याद आफुसँग भएको सचिव रविलाल पन्थ बताउँछन्।
आफ्नै आँटले सरकारी सेवा
निरन्तरको अध्ययन, विषयवस्तुको ज्ञान र प्रतिष्पर्धाको ‘लेभल’ मा ध्यान दिएर अध्ययन गरेमा लोकसेवा उत्तीर्ण गर्न सकिने अनुभव आफुले लिएको सचिव रविलाल पन्थले बताए।
सबै भाइले कतै निजी क्षेत्रको जागिरका लागि इच्छा पनि गरेनन्। निरन्तर अध्ययन गरेपछि सबै भाइ सफल भए। ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनुभन्दा अघि म मिहेनत गरेर अगाडि बढेँ भने सफल हुन्छु भन्ने विश्वास र भरोसा हुनैपर्छ। लोकसेवा आयोगमार्फत् हुने सम्पूर्ण जाँचहरु निष्पक्ष हुन्छन’, रविलालले भने।
सबै भाइहरुले उच्च शिक्षा काठमाडौंमा अध्ययन गरी सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने निजामति सेवाको तयारी पनि काठमाडौंबाट नै गरे। नाम पनि उनीहरु सबैले काठमाडौंबाट निकालेका हुन्।
जब ६ भाइमध्ये जेठा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे त्यसपछि सबै भाइलाई सरकारी सेवा प्रवेशले लोभ्यायो। सबै भाइको उमेर दुई÷दुई वर्ष मात्र फरक छ।
निरन्तरको कडा मिहेनतले सबै भाइ सरकारी सेवामा तत्लो तहबाट प्रवेश गरी माथिल्लो तहसम्म पुग्न सफल भए। सबै भाइ सरकारी सेवामा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नाम निकालेर उच्च पदमा पुगेका हुन्।
पन्थ परिवारका ६ भाइ, को कहाँ?
यदुलाल पन्थ रूपन्देहीको सैनामैनामा रहेको सामुदायिक सहिद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख छन्।
तीन दशकसम्म विद्यालय तहमा शिक्षण गरेका उनी अहिले क्याम्पसको जिम्मेवारीमा आएका हुन्। २८ वर्ष सरकारी शिक्षण पेशाका काम गरी यदुलालले राजीनामा दिएका थिए।
उनी क्याम्पस प्रमुख रहेको क्याम्पसमा अहिले करिब नौ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
माइला : कृष्णप्रसाद पन्थ (गृह मन्त्रालय)
बुद्धिप्रसादका महिला छोरा हुन् कृष्णप्रसाद। जब यदुलाल शिक्षक सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश उनलाई पनि सरकारी जागिर खाने हुटहुटी चल्यो। उनले नेपाल ‘ल’ क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। कृष्णप्रसादले विसं २०४२ सालमा मुखियाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।
त्यसपछि खरिदार, वाणिज्य बैंकमा नायव सुब्बा, शाखा अधिकृतहुँदै उपसचिव भएका हुन्। उनी पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेका हुन्।
साइला : माहादेव पन्थ (सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश)
माहादेवले व्यवस्थापन संकायबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी पनि विसं २०४४ सालमा मुखियाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनले पनि काठमाडौंबाटै नाम निकालेका थिए। त्यसपछि उनले सलेप (सहायक लेखा परीक्षक) नायव सुब्बा, अधिकृत, उपसचिवहुँदै अहिले सहसचिव भएका छन्।
काठमाडौंबाट नाम निकाले पनि उनले सरकारी सेवा भने काभ्रेबाट सुरू गरेका थिए। काभ्रेपछि पाल्पा, प्युठान, रुकुम, जुम्ला, बाग्लुङ, रोल्पा, धनकुटा, कैलाली, तनहुँ, नवलपरासी, सुर्खेत, काठमाडौं र रुपन्देहीमा उनले काम गरे। कार्यरत जिल्लामध्ये उनी नौ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि भए। उनी हाल लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा कार्यरत छन्।
काइला : रविलाल पन्थ (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनीको सचिव)
रविलालले अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन्। त्यस्तै उनी २०६२ जनप्रशासनको गोल्ड मेडलिस्टसमेत हुन्। उनले २०५३ सालदेखि राष्ट्र बैंकको खरिदारसरह सहायक द्वितीयबाट सेवा सुरू गरेका थिए। त्यसको तीन वर्षपछि रविलालले २०५७ मा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भए।
अधिकृतमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो पोष्टिङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुखको रुपमा भयो। त्यसपछि वन मन्त्रालय, त्यसपछि लोकसेवा आयोग क्षेत्रीय निर्देशनालय कास्की पोखराको प्रमुख भए। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौं आए।
त्यसपछि उनी दाङ, महोत्तरी, सुनसरी, बाँकेको गरी चार जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए। त्यसपछि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेत, बुटवलहुँदै अख्तियार टंगाल काठमाडौंमा पनि काम गरे।
अख्तियारपछि उनी सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ मा दुई महिना काम गरेपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको रुपमा कार्यरत छन्। २०६३ मा उपसचिव हुँदै २०६९ देखि हालसम्म सहसचिवका रुपमा कार्यरत छन्। उनी पनि सचिव पदको बढुवाको लाइनमा छन्।
ठाइला : विष्णुप्रसाद पन्थ (नेपाल टेलिकमको अधिकृत, काठमाडौं)
विष्णुले पनि अर्थशास्त्रमा एमए गरेका छन्। उनी पनि खरिदार तहबाट २०४८ सालमा सरकारी सञ्चार क्षेत्र नेपाल टेलिकमको सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। खरिदारहुँदै अहिले उनी अधिकृत तहमा काठमाडौंस्थित टेलिकममा कार्यरत छन्।
कान्छा : डा.नुरापति पन्थ (टियुको भौतिकशास्त्र सहप्राध्यापक, सहसचिव सरह)
नुरापति विज्ञान विषयका विद्यार्थी हुन्। उनले २०६४ सालमा प्राध्यापकमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट नाम निकालेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रवेश गरेका हुन्। त्यस अघि उनी काठमाडौंका विभिन्न निजी कलेजहरुमा पढाउँथे।
उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिक शास्त्रतर्फको सहप्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन्। उनले इटालीबाट पिएचडीसमेत गरिसकेका छन्।